amazon zvakanyanya kuderedzwa smartwatches kubva kune fossil, michael kors, uye zvimwe zvechitema chishanu
Kuru Nhau & Ongororo Amazon inodzikisira zvakanyanya smartwatches kubva kuFossil, Michael Kors, uye zvimwe zveBlack Chishanu
Amazon inodzikisira zvakanyanya smartwatches kubva kuFossil, Michael Kors, uye zvimwe zveBlack Chishanu
Fossil iri kumhanya neimwe ye Zvinoshungurudza Nhema Chishanu kutengeswa pane yayo yepamutemo webhusaiti yeUS, ichipa zvachose hapana zvidzikiso kune vanotarisira vatengi veiyo brand & apos; s ichangoburitswa Gen 5 smartwatch mutsara , ndiani pachinzvimbo anoda kugadzirisa akura Gen 4 zvishandiso kana inopisa nyowani dzakauchikwa ine zvishoma zvinyoro zvinyoro mune taw.
Usati waita iyo sarudzo, zvakadaro, iwe ungangoda zvakare kutarisa imwe yemazuva ano & apos; inotonhorera kupfuura 24-awa-chete Black Chishanu madhiri kuAmazon. Izvi zvinokukochekedza nesarudzo yako yeakanyanya kunyorwa-pasi Fossil Gen 5 mune maviri masitayera akasiyana, pamwe nemamwe akawanda anoshamisa asingadhuri smartwatch kubva kune anozivikanwa mafashoni zvigadzirwa zvinosanganisira Kate Spade New York, Michael Kors, Armani Exchange, Emporio Armani, Diesel , Puma, uye Skagen.
Muchiitiko chekuti iwe & apos; urikushamisika, ese aya akazara-smartwatches ane akazara-akakura ekugunzva ane iyo Wear OS software chikuva chakafanana, pamwe chete neiye mumwechete chaiye mugadziri muUS-based Fossil Boka . Iyo yakachipa pane iyo boka hachisi chinhu chitsva chose, uye nekudaro, iwe & apos; ungangodaro usashamiswe kunzwa iyo Skagen Falster 2 inorongedza yechinyakare Snapdragon Wear 2100 processor. Asi chinhu ichi chakanyatsoita (nenzira diki), ichivimbisa kuchengetedza mwenje kwemaawa akakwana makumi maviri nemana kana zvakadaro pakati pemari yekushandisa mushe, pamwe nekuwedzera mazuva maviri mune 'yakaderera-simba' maitiro, zvese pa yakanakisa dhisikaundi yemakumi maviri emadhora.
Ehezve, kana iwe uchida chimwe chinhu chitsva, uye zvirinani mune dzidziso, nekukurumidza zvakanyanya, haugone & apos; kutadza neFossil Gen 5 Carlyle kana Julianna pane yakasimba $ 90 pasi peyakajairwa, ichienzana ne31 muzana mutengo wakatemwa. Uyu akasimba simbi isina tsvina mukomana akaipa anouya neiyo Snapdragon Wear 3100 SoC, pamwe neiyo yakazara gig ye RAM, 8GB yekuchengetedza nzvimbo, uye hongu, kunyangwe yakavakirwa-mukati mutauri inogonesa izwi rekufona mashandiro pamwe chete ne iPhone kana Android ruoko.
Amazon iri kufunga zvakare pamusoro pevakadzi mwaka uno wezororo, vachitengesa rozi rinokwezva rose goridhe Kate Spade Scallop 2 uye rakatsvuka pink Michael Kors Access Sofie HR smartwatches pamitengo mikuru ye40 uye 30 muzana zvakateerana.
Vavhimi vekutenga vanotsvaga zvakanyanya dhizaini isina kurema vanozonyanyo shandiswa neyakawedzera-kudhura Puma Sport Smartwatch pa30 muzana kubviswa kana iyo Michael Kors Access MKGO iyo inodhura kuburitsa 135 bucks zvakaderera pane zvakajairwa. Kune rimwe divi remitambo, unogona kuwana imwe yemhando mbiri dzeDiesel pamutero we25 kana 30 muzana, uye pakupedzisira, mafashistasi anodanana nezita reArmani anokwanisa kusarudza pakati peiyo Shanduko uye musiyano weEmporio unotengeswa kwakatenderedza. 30 muzana kubva pane runyorwa. Taura nezve chimwe chinhu chevanhu vese, eh?
charger yemotokari ye iphone
boto3 kurodha pasi faira kubva s3
akanakisa emamiriro ekunze maapps emu 2015
AT & T inotangisa anti-mameseji uchityaira zvinyorwa
10 yeakareruka uye akatetepa eApple 6s kesi
Maitiro ekutora epic mifananidzo yemheni mheni neako smartphone kamera (uchishandisa manyorerwo ekudzora)
Kutanga Ne API Kuedza - Zvaunofanira Kuziva
Yepamusoro-soro Google Pixel foni inogona kusvika kare kupfuura zvaitarisirwa
Yakanakisa Google Pixel 3 uye 3 XL vadziviriri vechikwiriso iwe chaunogona kutenga izvozvi
Android 101: Ungachinja sei scrollable kana static Wallpaper
LG iri kuunza dhirowa reapp ku LG G5, Stylus 2, uye K8 - heino maapuro;